Nei Ecommerce yako uchifanira kushandisa Bing Webmaster Zvishandiso? | ECommerce nhau
Bing Webmaster Tools zvakaenzana nezvatinoziva nhasi se Google Search Console, kare Zvishandiso zveGoogle Webmasters. Iyo seti yezvishandiso zvesaiti optimization yeMicrosoft yekutsvaga injini, Bing. Tinoda kutaura newe zvinotevera nezve mabhenefiti ekushandisa Bing Zvishandiso zveWebhu Webhu mune yako Ecommerce.
1 Zvakanakira kushandisa Bing Zvishandiso zveWebhu Webhu
2 Zvimwe zvakanaka zvekushandisa Bing Webmaster Zvishandiso
Zvakanakira kushandisa Bing Zvishandiso zveWebhu Webhu
Bing inoramba iri sosi huru ye organic traffic
Ichokwadi kuti Google ndiyo sosi yepamusoro ye organic traffic, zvisinei Bing zvirokwazvo ndiyo yechipiri sosi yepamusoro. Izvo kunyange zvinozivikanwa kune account ye 20-30% yemasaiti 'emwedzi nemwedzi organic traffic.
Bing iri kuwedzera
Injini Kutsvaga kweMicrosoft iri kuwedzera kukura kwayo nekuda kwesangano neYahoo iri kushanda kubvira 2010 uye kubatana kwayo neAOL kwakatanga kushanda kutanga kwegore rino ra2013. Mugove wemusika weBing mumwe nemumwe wakakwirira, asi kana nhamba dzeYahoo neAOL dzakawedzerwawo Zvinoitika kuti iyi yekutsvaga injini yakamisikidzwa zvine imwe nzira ye SEO optimization.
Inopa yakasarudzika chishandiso uye data
Imwe mukana we Bing Zvishandiso zveWebmaster zveEcommerce ndeyekuti inopa malipoti ekuongorora, pamwe nekuwedzera bvunzo dzesaiti. Kunyangwe akawanda maturusi ayo akafanana neGoogle Search Console, zvimwe zvinhu zvinongowanikwa muBing. Naizvozvo, zviri nyore kushandisa maturusi aya kutarisa mashandiro eEcommerce yako muBing pakutsvaga kwehupenyu kana kutowana ruzivo rwakatariswa muGoogle.
Zvimwe zvakanaka zvekushandisa Bing Webmaster Zvishandiso
Pamwe chete nezvambotaurwa, Bing Webmaster Tools inopa mamwe mabhenefiti eEcommerce nemawebhusaiti mune zvese, kusanganisira:
Kuchengeta uye kunongedza kuita
Keyword yekutsvaga uye optimization matipi
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » SEO » Nei Ecommerce yako uchifanira kushandisa Bing Webmaster Zvishandiso?
Zvikumbiro zvekutora zvinopihwa uye zvidzoreso paunenge uchitenga online